Indlela yokwenza makeup enhle ku-prom
Isikhathi sokuhlukana nesikole siyeza, kuza umzila ongaphezu kwalokho okuqala khona impilo yabantu abadala. Futhi inhliziyo enhle kangaka iyabulala ekucabangeni ukuthi cishe wena uzowela lo mzila futhi umemezele emhlabeni wonke ukuthi ungumuntu owanelisayo futhi othakazelisayo, umuntu oqhakazile. Ngokushesha uzofika ibhola lakho lokuqeqesha, lapho ufuna ukuba yinkosikazi - enhle kakhulu, enhle futhi ehlanziwe.
Kakade manje usucabanga ukuthi yikuphi ukugqoka okumele ukhethe ukuze uthole i-prom. Ufuna isitayela, umbala, isitayela esizoveza ukuhlukile kwakho nokuhle phakathi kwabafundi abaningi kulolu suku kusihlwa. Ingubo ikhethiwe, izicathulo, izesekeli zihlangene ngokuphelele. Ikhanda lekhanda elikhethiwe ngaphambili, kulolu suku oluyigugu oludinga ukuphinda ukhethe okukhethwa kukho. Into yokugcina futhi ebaluleke kunazo zonke ukukhetha ukwakheka okunamathekisthi nokwenza kahle.
Ama-Makeup for party ukuphothula
Okokuqala, sizobona ukuthi yikuphi okugqoka okuthandayo. Phela, nguye kuphela ozokhipha isithombe sakho sebhola lokuqeqesha, elingasoze liphindwe.
Lezi zindwangu zokukhanya zomoya ezinemihlobiso emihle, imibala ye-pastel, amaphethini ezimbali, izimbadada ezinezintambo ezincane noma ama-slippers enhle, ama-curls asakazeka phezu kwamahlombe. Ungadluli isithombe sakho ngezithunzi ezikhanyayo noma u-lipstick, sisekela isihloko sothando nomusa.
Iphimbo lobuso liyindalo, ukukhanya okuncane okukhanyayo ku-clavicle, i-decollete, kuma-cheekbones, amahlumela amasha.
Blush kuyinto umthunzi pink.
Izithunzi - kuya kwamehlo aluhlaza, ama-karim nama-blue ahambisana ne-violet, i-lilac, i-caramel, i-pink pink, ipayipi. Ungasebenzisa izithunzi ngokudonsa komama-we-pearl, nge-elegant light flicker.
Ama-eyelashes ayinhlanganisela ephezulu noma i-Ribbon cilia.
Izindebe - ngokuzithobayo, ezishintshashintshayo, ezikhanyayo ze-berry shades.
Ukuzenzela okuphelele kwebhola ngesitayela seBarbie
Izembatho zingaba candy shades kusuka isaladi, lilac, blue, pink. Zingenziwa kusuka ku-chiffon ngomgexo we-taffy noma zikhonjiswe kusuka ku-satin. Izicathulo ezinezimbali kanye nemicibisholo, ezibhebhisini ze-satin. Lesi sithombe sifanele ukumisa okunjalo:
Ithembo lesikhumba nekhanyane elincane elikhanyayo.
I-Blush iyisithunzi esimnyama se-salmon ebomvana.
Amehlo yimicibisholo encane, ngaphansi kweshiya nesikhumba sejwabu esiphakeme ukuze abeke uphawu oluqakathekileko lwe-shades yama-pearl. Maka umkhosi wekhulu ngomthunzi omnyama wamathunzi - uhlaza okwesibhakabhaka, i-turquoise, pink, peach, violet.
Ama-eyelashes - i-mascara ekwandisa noma i-eyelashes yamanga.
Izindebe - ukungaziphathi kahle kwezindebe eziqinile noma ezikhonjiwe noma ukukhanya kwe-lacquered kombala obomvana.
Ukuzijabulisa - ukuqaphela nemithetho
Ngasemncane kakhulu udinga ukusebenzisa izimonyo, ezenzelwe isikhumba esincane. Ngaphambi kokusebenzisa izimonyo zokuhlobisa (izithunzi, powder, isisekelo), udinga ukuhlanza isikhumba.
Ngemuva kokuhlanza, sebenzisa i-moisturizer, ukuze uqiniseke ukuthi ingahamba kahle ngokumisa. Phindaphinda uphenyo kusengaphambili, hamba naye amahora amaningana, qinisekisa ukuthi izimonyo azigcini phansi futhi zigcina kahle. Uma ithoni iphelile, udinga ukusebenzisa esinye isisekelo sekhrimu.
Uma isikhumba esomile kufanele sibe ukhilimu we-tonal we-translucent ukuze ulinganise umthunzi. Uma une-inhlanganisela noma isikhumba samafutha, udinga ukusebenzisa i-powder ekhunizayo, kodwa ngemuva kokulungisa ukushiyeka.
Ngemva kokusebenzisa i-tonal cream eguquguqukayo, zibuke ngokucophelela esibukweni, mhlawumbe uhlale ngaphansi kwamehlo noma izindawo ezibomvu ezivela emaceleni.
Ama-pimples abomvu asebenzisa umlungisi wombala oluhlaza, futhi ukhilimu okhethekile ovela kwimibuthano kuzosiza emibuthanweni ngaphansi kwamehlo. Faka isicelo sokulungisa umonakalo nomthunzi kahle ukuze kungabonakali amabala.
Thatha i-lip yakho isicwebezelisi nama-napkins we-matting nawe ukuze uzibuke kahle ngaphambi kwamakhamera nezithombe.
Futhi-ke ngenxa yebhola lokuphothula iziqu, ukwakheka kuyoba kuhle, kuhle futhi kuphumelele.
Ukwenzela i-Festive for the New Year 2017 Firecracker: TOP-4
Indlela yokukhetha ukwakheka kwengubo yokuhlwa
Ukwenza okwenziwe nge-Stylish for Eve's New Year: imibono, izithombe, izithombe nezimonyo zokwenza ngokwezifiso
Izigaba zokusebenzisa izimonyo
Ungakhetha kanjani izibhamu ezenziwe kahle?
Luhlobo luni lokwakheka olufanelana nami?
Biography nokuphila komuntu siqu ka-Eldar Lebedev. Izithombe ezincane zowesifazane nendodana
I-Salmon ene-jam orange
Thenga ukubethelwa kwezingane
Ukushayela ngodada namakhowe
Ungayilungisa kanjani i-lip balm?
Izindwangu zesikhumba: umlando, ukwakheka, ukuthi ungakhetha kanjani
Izincomo ezingu-12 zendlela yokwenza ubuciko obuchwepheshe
I-goose tincetu ze-ovini
Indlela yokuhalalisela amadoda ngoFebhuwari 23?
Yini engenziwa nge ushokoledi omnyama?
Indlela yokudweba isikole nabothisha ipensela nemibala: izithombe zesinyathelo ngesinyathelo sezingane
Ukuhlanza amathumbu, amakhambi abantu
I-tab: uchungechunge olusekelwe encwadini kaRoman Trakhtenberg